Radio Asal 88.6 MHz – Jowhar _ Soomaaliya » Dhageyso:- Wasiir Caadle Oo ka Hadlay Amni Darada Jowhar.
Dhageyso:- Wasiir Caadle Oo ka Hadlay Amni Darada Jowhar.
Mar 30, 2019 - jawaab
Isaga oo ka qeyb galayay madal lagu soo gabagabeynayay wajiga 1aad ee mashruuca ka qeyb galka nabada iyo doorka haweenka iyo dhalinyarada magaalada jowhar ayaa waxa uu ka sheegay wasiirka Arrimaha Gudaha iyo dowladaha Hoose Mudane Maxamed Cali Caadle kaalinta nabada ay ku leeyihiin haweenka reer jowhar iyo in ay la socdaan dhaqdhaqaaqa caruurtooda si ay usoo kordhiyaan xasilooni waarta.
Wasirka ayaa sheegay hadi haweenka aanay ka qeyb galin doorka nabada ay taasi tahay arrin aan mira dhal wanaagsan yeelan Karin sida uu hadalka udhigay wasiir caadle.
Wasiirka ayaa sheegay in waalidka gaar ahaan hooyada hadii ay xil iska saarto xaqiijinta ilmaheeda ay sahlanaan karto wax ka qabashada xaaladaha amaanka si taasi loo suurta geliya waa in ay iskaasha la sameeyan dhamaan laamaha amniga iyo xarumaha waxbarashada.
Dhinaca kale wasiir maxamed Cali Caadle ayaa ka hadlay dhacdooyinkii foolka xumaa ee dhawaanahani ka dhacayay meelo ka mid ah soomaaliya kuwaasi oo ahaa kufsiga loo geystay haween da’ah caruur aan qaan gaarin, waxa uu sheegay in ay tahay arrin ubaahan in haweenka ay kala kaashtaan laamaha amniga soona gudbiyaan dhinacyada ama shaqsiyaadka ay kaga shakiyaan in ay ku lug leeyihiin arrimahaasi si wax looga qabto.
Inta badan madaxda maamulka HirShabelle ayaa lagu dhaliilaa in sidii loo baahnaa aanay wax uga qaban dhacdooyinka la xiriira amaanka degaanada maamulka uu ka arrimiyo sababo kala duwan hase yeeshee dabayaaqadii sanadkii hore ee 2018 kii ayaa waxaa jowhar lagu kufsaday haween 95 jir ah taasi oo aan helin wax cadaalad ah halka dhacdooyin isdaba jog ahaa oo kufsiyo ah ay ka dhaceen gudaha jowhar mar dambana ay dhacdooyinkaasi kuwa la mid ah ay ka dhaceen qaar ka mid ah magaalooyinka dalka.
Kuwo ka dhacay degaanada maamulka Puntland waxaa loo soo qabtay 5 dhalinyaro ah kuwaasi oo lagu xakumay dil toogasho ah waloo weli la sugayo in la fuliyo xakunka maxkamada qaaday dacwadaasi.